Ciidamada Afrika oo maanta tababar u furmay - BBC News Somali
Ciidamada Afrika oo maanta tababar u furmay
Ciidan ay Midawga Afrika leeyihiin oo wadamo badan ka kala socda, ayuu tababar uga bilawday maanta dalka Koonfur Afrika.
Hawlgalka oo loo bixiyay Amani Africa, ayaa looga golleeyahay samaynta ciidan ay Afrika leedahay oo heegan ah, si rasmi ahna u hawlgala dhamaadka sanadkan.
Dhoola tuska military, waxa lagu saleeyey xaalad ka taagan waddan mala awaal ah oo la doonayo in ay ciidanka heeganka ee Afrika ay faragelin ku sameeyaan, iyagoo faragelintoodana ku salaynaya xeerka u dejisan Qaramada Midoobay.
Tababarkani waxuu gacan ka geysanayaa in la qiimeeyo sida ay u diyaargaroobeen ciidamadan oo la doonayo in ay faragelin ku sameeyaan mushkiladda ka taagan Africa, isla markaana ay kormeeraan howlgalada nabad ilaalinta.
Mid ka mid ah sababaha loo asaasay ciidanka heeganka ee Afrika, ayaa waxay tahay in qaarada aanay u baahan ciidamo shisheeyo oo qaaradaha kale ka yimaada marka ay dhibaato ka dhacdo qaarada.
Balse, haatan Midowga Africa waxa uu sheegayaa inuu u baahan yahay hal bilyan oo doolar oo uu ku maalgeliyo hawlgalka ciidamada, lacagtaas oo uusan haysan ururka haatan.
Waxaa halkaasi kaaga muuqanaysa in qaarada weli ku tiirsan tahay taageerada ay ka helayso deeq bixiyaasha. Sidoo kale waxa jira caqabado kale oo ay ka mid yihiin dhibaato dhinaca agaasimada iyo iskudubaridida ciidanka iyo iyadoo meesha ay ka maqan tahay rabitaan siyaasadeed ee waddamada xubnaha ka ah Midowga Afrika.
Kaddib muddo shan sano ah oo dib loo dhigayey hawlgelinta ciidankan, ayaa haatan waxa la filayaa in ciidankan uu hawlgalo bilawga sanadka soo socda ee 2016-ka, waxaana ilaa haatan diyaar ah shan guuto oo ay ku deeqeen shanta urur goboleed ee dhinaca dhaqaalaha ee ka jira qaarada.
Toddobaadkii la soo dhaafay Cameroon, ayaa waxay qalinka ku duugtay heshiis u ogolaanaya in ay martigeliso ciidankan oo xaruntiisa laga dhigayo magaalada Douala ee Cameroon.